ahlawat's blog on decentralized web
Torum အကြောင်း တစေ့တစောင်း ( Henry Aung ) မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့တော့ Torum အကြောင်း ကျွန်တော်သိထားသလောက် ဝေမျှပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ Cryptocurrency နှင့်ပတ်သက်လျင် ကျွန်တော့ အနေဖြင့် ကျွမ်းကျင်သူ အဆင့်မဟုတ်သော ကြောင့် အမှား တစုံတရာ ပါဝင်သွားလျင် ကျွန်တော်၏
Cryptocurrency မျှော်လင့်ချက် ( Henry Aung )မင်္ဂလာပါ။ တနေ့ တနေ့ Hive platform လေး ပြေးကြည့်လိုက် ၊ Torum platform ဘက်လှည့်လိုက် XTM လေး ပြေးကြည့်လိုက် ၊ ၁၅ မိနစ်ပြည့်သွားလျင် AXO လေး ပြေးနှိပ်လိုက် နှင့် အားရသည်မရှိပါ။ AXO လေးကလည်း
A journey in which everything is wonderful.Hello friends, let me tell youastory. Which I have narrated to my son. There wasaSindbad. He embarks on an adventurous journey his early life. Sindbad was fond of adventure. When his father died, he
ကျွန်တော်ထင်သမျှ Torum ( Henry Aung )မင်္ဂလာပါ။ ယနေ့ cryptocurrency ဈေးကတော့ တဟုန်ထိုး ခုန်ချဆင်းသွားခဲ့ရာ ကျွန်တော်တို့ Hive လည်း ဘာခံနိုင်မည်နည်း။ လိုက်ပါကျဆင်းသွားရသည်ပေါ့။ တက်တုန်းတက်ပြီး ဆိုတော့ ပြန်ကျဖို့ပဲ ရှိတော့သည်ကိုး ။ Cryptocurrency
Airdrop ခေါ် လေပြုတ်ကျ ( Henry Aung ) မင်္ဂလာပါ။ မနေ့က METAMASK အကြောင်း ရေးရာတွင် Airdrop ယူရာ၌ Gas fee လိုအပ်ကြောင်း မှားယွင်းရေးသားမိပါသည်။ အမှန်တော့ Airdrop ယူရာတွင် Gas fee မလိုပါ။ ရရှိလာသော token များအား Swap လုပ်ရာတွင် ဖြစ်စေ အခြားသော
METAMASK နှင့် သတိထားစရာ ( Henry Aung )မင်္ဂလာပါ။ မနေ့က METAMASK အကြောင်း ဖေါ်ပြပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ ယနေ့တော့ METAMASK တွင် မှတ်သားစရာ အချို့အား ဖေါ်ပြပေးချင်ပါသည်။ ယခု နောက်ပိုင်း ထွက်ပေါ်လာသော De-Fi project များ အားလုံး လိုလိုသည် METAMASK
India in tron transaction can be done easily.Hello friends, we have been working on Tron foralong time. I have bought and sold some Trons. I have benefited the most. In which some Tron come daily from Steemit. This Tron is directly added to our
Binance Smart Chain ( BSC ) နှင့် METAMASK ( Henry Aung ) မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့ကတော့ အားလုံးသိချင်နေတဲ့ METAMASK နဲ့ Binance Smart Chain ချိတ်ဆက်နည်းကို ဖေါ်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံနှင့်တကွ ဖေါ်ပြပေးမှာဆိုတော့ အားလုံး နားလည် မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ METAMASK
နေ့ရက်တိုင်းအတွက် Cryptocurrency ( Henry Aung ) မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့ အနေဖြင့်ယခုတလော Cryptocurrency အကြောင်းအရာများသာ ရေးသားရန် အားသာ နေသည် ဖြစ်ရာ ယနေ့လည်း Cryptocurrency အကြောင်းသာ ဆက်ကြပါအုံးစို့။ ယခုတလော ကျွန်တော်တို့ Torum နှင့်ပတ်သက်ပြီး အခြားသော
Double IPAHi Friends, I tried another craft beer from BJ's Restaurants and Brewery the other night. This one is named Committed: This isadouble IPA that isalittle stronger at 8.6% abv. I was very pleased with